अहिले ह्याट्रिक, अबको मिशन नेपालकै धेरै उपन्यास — Chetana Online
नेपालपत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासन उपन्यासकारकारुपमा पनि परिचित छन् । पत्रकारिता क्षेत्रमा केन्द्रीय स्तरमै राम्रो हैसियत बनाएका प्रियासनले आठ वटा उपन्यास प्रकाशित गरिसकेका छन् ।
उनले एउटा कथा संग्रह र एउटा सम्पादकीयको संग्रह पनि प्रकाशित गरेका छन् । प्रियासनको पछिल्लो प्रकाशन ब्रेकअप डायरी नामक उपन्यास हो । जसलाई बिएन पुस्तक संसार काठमाडौले बजारमा ल्याएको छ । प्रियासनले यसवर्ष तीन वटा उपन्यास प्रकाशित गरेर ह्याट्रिक हानेका छन् । प्रस्तुत छ, भविष्यमा सबै भन्दा धेरै उपन्यास निकाल्ने उपन्यासकारका रुपमा आपूmलाई चिनाउने लक्ष्य लिएका प्रियासनसँग यी र यावत विषयमा हामीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षप । (सम्पादक)
ब्रेकअप डायरी कसको कथा हो ?
प्रेमको परिभाषाभित्र रहेर साँचो प्रेम गर्दा धोका पाएका दुई आत्माको कथा हो । प्रेम पीडाबाट आफूलाई मुक्तिदिएर मनमा लागेका घाउहरुलाई निको बनाउँदै जिन्दगीको सुन्दरलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने सोँचहरुको कथा हो । व्यथित मन बोकेर संघर्षशील जीवन अगाडी बढाउँन सफल हुने आम युवाहरुको कथा हो ब्रेकअप डायरी ।
यो उपन्यासले मुख्य के सन्देश दिन खोजेको छ ?
यो उपन्यासले प्रेम गहिराईमै डुबेर गर्नुपर्छ । कदमकदाचित प्रेममा बिछोड भएमा जिन्दगी बाँकी छ, ब्रेकअप भएमा जिन्दगी सकिदैन, भन्ने मुख्य सन्देश दिएको छ । अहिले पनि प्रेममा पीडा पाएकाहरुले आफ्नो जिन्दगीलाई नारकीय बनाएको हामीले देखिरहेका छौ । कतिपयले प्रेम वियोग पछि कुलतको बाटो समात्छन्, कोही अपराधी बन्छन्, कसैले सुसाइट गर्छन् । कसैले घरबारै त्याग्छन् । ब्रेकअप डायरी मार्फत मैले प्रेम वियोग भएपछि आफूलाई कसरी सम्हाल्न सकिन्छ, सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउन खोजेको छु । मानिसको जिन्दगी अमूल्य छ, ब्रेकअप हुँदैमा जिन्दगीको महत्वलाई बिर्सनु हुँदैन, मेरो यस विषयमा मान्यता यही छ ।
हरेक पटक नयाँनयाँ कथा, विषय बस्तुमा उपन्यास निकाल्नु हुन्छ ?यसवर्ष तीन वटा उपन्यास निकाल्नुभयो, दिमागमा कसरी अटाउँछन् यी सब कुराहरु ?
सबै कुरा लत अर्थात बानी रहेछ । आजकाल उपन्यास लेख्ने, निकाल्ने लत लागेको छ । जहाँ जाँदा पनि नयाँनयाँ कुराहरु सोँच्ने, यसैमा चिन्तन् मनन् गर्ने गर्छु । मेरो दिमागमा शव्दको भण्डारी छ त म भन्दैन, तर लेख्न लागेपछि कहाँबाट आउँछ आउँछ ।
सधैभरी अन्यको तुलनामा युनिक नाम छनौंट गर्नु हुन्छ, कसरी जुराउनु हुन्छ नाम ?
म कथा अनि त्यसले दिन खोजेको सन्देश अनुसार नाम छनौंट गर्छु । नाम छनौट गर्दा सबैको दिलदिमागमा घण्टी हान्न सक्ने किसिमको नाम राख्छु । ताकी नामले पनि उपन्यास पढ्नका लागि केहीलाई बाध्य बनाओस् ।
तपाई पत्रकार पनि ! समाचार लेख्दा आनन्द आउँछकी उपन्यास ?
पत्रकारिता मेरो पेशा हो । यसले मलाई बचाएको छ । तर नढाँटेर भन्ने हो भने मलाई उपन्यास लेख्दा नै आनन्द आउँछ ।
छोटो समयमा नै आठवटा उपन्यास निकाल्नुभयो, गिनिजबुकमै नाम लेखाउने विचार छ कि कसो ?
उपन्यास लेख्ने मेरो बानी बनेकाले अरु त धेरै कुरा सोचेको छैन, नेपालमा सबै भन्दा धेरै उपन्यास लेख्ने व्यक्ति बन्ने सोँचमा छु ।
अग्रीम शुभकामना छ, हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई, अब कुन उपन्यास निकाल्ने, लेख्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
यतिबेला म कथाको खोजीमा छु । सन्देशमुलक अनि फरक कथा भेटिएमा केही समयमा उपन्यास लेख्न कार्यमा जुट्नेछु ।
यहाँले लेखेको तर ननिकालेको नायीका नम्रता श्रेष्ठको बारेमा लेखिएको नोभेल नम्रता अहिलेसम्म ननिकाल्नुको कारण ?
नोभेल नम्रता तयार नै छ । नायीका नम्रता श्रेष्ठले मैले लेखेको बाहेक केही कुराहरु थप्छु, त्यसपछि निकालौला भन्नु भएको थियो । संयोग त्यसै भन्नुपर्छ, उहाँ र मेरो भेट हुन सकेको छैन । म दाङमा व्यस्त छु, उहाँ काठमाडौमा । त्यसैले नोभेल नम्रता निकाल्न पाएको छैन ।
तर, उहाँले मेरो अनुमति छैन भनिरहनु भएको छ त ?
उहाँको कथामा लेख्दा स्वाभाविक रुपमा उहाँको अनुमति आवश्यक पर्छ । समय र परिस्थितिले उहाँलाई उपन्यास ननिकाल्ने सोँचमा पु¥याएको छ भने मैले जबरजस्ती निकाल्न राम्रो हुँदैन ।
तपाई पत्रकारितामा पनि अत्यन्त क्रियाशिल हुनुहुन्छ ? कतिबेला साहित्य सिर्जना गर्न भ्याउनु हुन्छ ?
यहाँले प्रकाशित गरेका लक्कीचाम, सेल्फी, सहनशीला, पल्लवी लगायतका उपन्यासहरुले विमोचन भएकै केही दिनमा राम्रो बजार लिएको सुनियो । हजुरले लेखेको उपन्यासहरु राम्रो भएर हो कि, प्रकाशक संस्था वा तपाईको व्यक्तित्वका कारणले बजार ओगटेको हो ।
उपन्यास राम्रो नराम्रो छुट्याउने काम पाठकको हो । जहाँसम्म बजारमा आएको केहीदिनमै राम्रो प्रतिक्रिया आएको थियो भन्ने कुराको पछाडि सबै कुराले काम गरेको छ । जसले गर्दा त्यति बिक्री हुनु स्वाभाविक छ ।
समय गतिशिल छ । जीवनको महत्वलाई बुझेर गतिशिल समयभित्र समाज अनि देशको समृद्धिका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रमा भूमिका खेलौ । जिन्दगीको महत्वलाई बुझौ । कुनै पनि ठाउँमा ब्रेकअप हुन्छ भने निराश नबनौ । दिन सबैको आउँछ, म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु ।